Dhageyso:-Waa fiican tihiine bal fiiriya ficilada idinka horeeya(Faalo) | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / WARARKA / Dhageyso:-Waa fiican tihiine bal fiiriya ficilada idinka horeeya(Faalo)
Dhageyso:-Waa fiican tihiine bal fiiriya ficilada idinka horeeya(Faalo)
Posted by: DBN in WARARKA, WARARKA CAALAMKA, WAREYSIYO April 10, 2017	Comments Off on Dhageyso:-Waa fiican tihiine bal fiiriya ficilada idinka horeeya(Faalo)
Dhowaan madaxweynaha iyo Ra`iisul wasaaraha waxay isbedel ku sameeyeen Taliyaasha laamaha Amniga soomaaliya Sida Milatariga,Booliiska,Nabad Sugida iyo Asluubta.
Waxaana loo magacaabay Taliyaal xilalkaan horay qaarkood u soo qabtay sida nabad sugida iyo booliiska Sanbaloolshe iyo saacid.
Siyaasiyiinta la dhacsan Taliyaashaan lamagacaabay waxay sheegaan in ay la imaan doonaan howl hagaagsan,halka kuwa dhaliisha qabana ay ifinayaan in saraakiishii ka horeysay wadadii ay qaadeen mid ka duwan aanay laga sugaynin.
Waxaa hada horyaal saraakiisha wado qodxo iyo dhagaxaan miiran ah waajibna ay ku tahay maritaankeeda si soomaaliya geediga dheer ee gashiinka mooyee nagaasha lahan loogu gudbo. Dabcan waa fahanteen ayaa filayaa meesha aan ula jeedo markii aan kahadlayno xaalada amaan ee soomaaliya.
Taliyaasha waa in ay ogaadaan ciidanka ay madaxda uyihiin inta saxda ah ee ka go,an daacad nimada dalkooda iyo ilaalinta xuquuqda shacabka ay u xidheen dareeska iyo qoriga.
Waxaa jira kuwo xiran dareeska iyo qoryaha oo bulshada ay ka cawdaan markii saraakiisha ka sareysa lajoogaana iska dhiga raga ugu Aadaabta badan ciidanka.
Sargaalka waaya Araga ah kuwaas oo kale waa uu garan karaa ficlan iyadoo aaney loo tilmaamin.
Waxaa kaloo jiri kara kuwo dhinac kale si hoose ula shaqeeya dhaqaaleba ha ugu xishaane hadii la doono waxaa ku jiri kara saraakiil ay adagtahay in howshooda la ogaado Waasa la ogaan karaa hadii daacad nimo ay jirto.
Waxaan leeyahay waa tii geedka uu yiri gudane ima gosyseen hadii gabalkayga kuugu jirin waxaan ula jeedaa amnidaro madhacdeen, xaruna lama weerareen Mas`uulna lama qarxiyeen iyadoo meelkasta ay taataagan yihiin ciidamada dowlada soomaaliya.
Hadii taliyaasha arimahaas sixirfad ku dhehantahay ugu howl galaan waxaa xaqiiqa ah in amaanka uu gacanta ugalayo hay`adaha dowlada, shacabkana ay ku diirsan doonaan xaalada maan ee baadi goobka loogu jira hadii ay dhaqan gashana arimahaas waa tilaabo aan horay loo qaadin waasa loo riyaaqi doonaan arimahaas.
Ku darsada dhinaca idinka soo horjeeda waa waxa la idiinku xardhay derajada aad ku xaragootaan.
Soo afjarida arimahaas waxay ka mid tahay ka talaabida wado qodaxo iyo dhagaxaan dhax yaalaan.
Waa muhiim tirada ciidanka aad madaxda utihiin iyo lanbarka saxda ah ee ciidanka, ka warhanta Askarta xerada dibada ugu baxaya waa sida uu dhigayo sharciga ciidanka, dabcan idinkuna ma moogadiin sharcigaas.
Ina haas oo dhan waa qaabka aan isleeyahay waa tan kaliya ee guul lawada sugayo lagu gaari karo.
Saraakiisha lamagacaabay ee booliiska Milatariga,Nabad sugida iyo Asloobta ilama,ahan ka baaraan degid la,aan in madaxda idinka xusheen kuwa idin lamidka ah dabcan waa waxa keenay in la,idin magacaabo waa in aad ka fogaataan erayga ah ina,adeer iyo saaxiib
Sida awgeed waa fiican tihiine bal fiiriya ficilada idinka horeeya.
Waxaa diyaariyay Weriye faarax ibraahim yacquub
Previous: Dhageyso:Xildhibaan ka tirsan M/Konfur Galbeed oo ka hadlay arimo Xasaasi ah
Next: Dhageyso:-Wasaarada amniga oo wax ka qabaneyso arimo taagan